Gaboraraka, kiantranoantrano… | NewsMada
Par Taratra sur 06/10/2018
Tsy mety tapitra ny resabe mikasika ilay hoe hanoloana, na hanavaozana indray ny “permis biométrique” sy ny “carte grise biométrique” ho tena manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Isan’andro, mavaivay ny fanehoan-kevitra mitsikera ny tompon’andraikitra nisahana izany, any anatin’ireny tambajotra sosialy ireny sy amin’ny alalan’ny antso an-telefaonina re amin’ireo radio samihafa. « Tena fandrebirebena izao ! », hoy ny sasany. « Fanaovana tsinontsinona anay tsotra izao ! », hoy ny hafa. « Raha efa fantatra fa tsy manara-penitra ilay teo aloha, nahoana no mbola notohizana sy natao ihany ?”, hoy ny fanamarihana hafa.
Fanamarihana sy fanakianana hita fa tena mitombona avokoa izany. Tsy mahagaga raha mamatrapatratra sy mamelively ny rehetra. Azo ambara koa anefa fa endriky ny tsy fahaiza-manao sy ny tsy fahaiza-mitantan’ny fitondram-panjakana amin’ny ankapobeny izany. Taratry ny gaboraraka sy ny kiantranoantrano amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana. Tetika ankolaka ahazoana tombontsoa manokana. “Bizina”, hoy ny fitenin’ny tanora ankehitriny. Tranga iray amin’ny maro ihany ity olana mitranga amin’ny hoe fanavaozana indray ny “pérmis biométriue” ity, fa maro ny endri-javatra tahaka izany, any amin’ny minisitera isan-karazany any.
Ny vahoaka tsy te hahalala izay fifanarahana tamin’ny orinasa vahiny, na izay orinasa teto an-toerana nanao ny fanontana ireny “permis biométrique” teo aloha ireny. Ny fantany, volam-panjakana, izany hoe, volam-bahoaka no nihodina tao anatin’izany. Ary rehefa miteny hoe “volam-pankana”, na “volam-bahoaka”, indrindra raha nampiasaina amin’ny fomba tsy mazava, miendrika fanodinkodinana sy fitadiavana tombontsoa manokana tahaka izao, tena mahasarotiny tokoa izany. Asa moa izay hihafaran’izy ity, ny hita taratra aloha hatramin’izao, karazany ho vitavita mora eo indray ny raharaha. Mahavariana loatra a!